रेडक्रस र गाउँपालिकाको साझेदारीमा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण - Online Sajha	Online Sajha
२८असोज, रोल्पा । रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–१, कुरेली खरिबोटमा अलपत्र रहेको स्वास्थ्यचौकी भवन रेडक्रस र परिवर्तन गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण भएको छ । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माणाधिन उक्त ८ कोठे भवन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रम (सिइएचपी) नेपालगञ्जको सहयोगमा भवन निर्माण गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, रोल्पाका सभापति डी.बी. घर्तीमगरले बताउनुभयो ।
सम्झौता अवधिभित्रै सम्पन्न
स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणका लागि गत १५ कार्तिक २०७६ बाट सुरुभइ ३१ बैशाख २०७७ मा निर्माण गरिसक्ने सम्झौता थियो । करिब ६ महिनाभित्रै सकिसक्ने सम्झौता अनुसार स्थानीय उपभोक्ता समितिले समयमै निर्माण गरिसकेको तर कोरोनाका कारण सुचारु गर्न नसकिएको स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वडाअध्यक्ष बमबहादुर पुनले बताउनुभयो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिइएचपी नेपालगञ्ज, परिवर्तन गाउँपालिका र समुदायको संयुक्त योगदान रहेको भवनमा ७४ लाख ८१ हजार ६ सय १३ रुपैयाँ लगानी रहेको रेडक्रसका जिल्ला सभापति डी.बी. घर्तीमगरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रेडक्रसले ५५ लाख, ६५ हजार ६ सय दुईरुपैयाँ, परिवर्तन गाउँपालिकाले १५ लाख र समुदायले ४ लाख १५ हजार ७ सय १० गरी जम्मा ७४ लाख ८१ हजार ६ सय १३ रुपैयाँको लागत रहेको छ ।
अब सहज सेवा प्रवाहको अपेक्षा
अस्तव्यस्तताका बीच स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यचौकी भवन बनेपछि भने सहज सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘कुरेलीको खरिबोट धेरै समुदायको पायक पर्ने ठाउँ भएकाले पनि यहाँ सधै सेवाग्राहीको चाप रहन्छ’ स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज नरबहादुर डाँगीले भन्नुभयो, ‘भवन अभावकै बीच पनि सेवा दिइरहेका थियौं, अब झन् सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौं ।’ परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीले स्वास्थ्यका दृष्टिले सामरिक महत्वको ठाउँ खरिबोटमा स्वास्थ्य भवन निर्माणका लागि रेडक्रससँग सहकार्य गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । ‘भौतिक संरचनाका हिसावले अब राम्रो भएको छ’ अध्यक्ष डाँगीले भन्नुभयो, ‘अब कसरी राम्रो र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने कुरामा अझै सबैको जागरुकता आवश्यक छ ।’
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गाउँपालिका र रेडक्रसको सहकार्य उदाहरणीय रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य नौलसिंह पुनमगरले बताउनुभयो । भौतिक संरचना पनि महत्वपूर्ण पाटो रहेको भन्दै रेडक्रसका पूर्व जिल्ला समापति समेत रहनुभएका पुनले भवनको संरक्षण र थप विकासका लागि गाउँपालिका तथा वडाले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणसँगै कुरेली र आसपासका वार्षिक करिब २ हजार ६ सय १० जनाले सहज स्वास्थ्य सेवा लिने रेडक्रसका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मण स्वर्णकारले बताउनुभयो ।
अलपत्र थियो स्वास्थ्यचौकी
परिवर्तन गाउँपालिकाको वडा नं. १ साविक कुरेली गाविसस्तरको स्वास्थ्य चौकी हो । स्वास्थ्यचौकी निर्माणका लागि तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले क्रमागत बजेट दिने भन्दै सुरुको वर्षमा ६ लाख दियो । रुकुमका लालबहादुर महरले भवन निर्माणको जिम्मा लिए । जग खनेर पिलरका लागि सरिया पनि ठड्याइयो । निर्माण कार्यका लागि जब ६ लाख रुपैयाँ उनले हात पारे तब काम अलपत्र पारेर हराए । सोही शीर्षकमा कुरेली उपाबाङ माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणका लागि आएको ६ लाख पनि लालबहादुर महरले बोकेर हिडे । त्यसयता उपाबाङ विद्यालय भवन र कुरेली स्वास्थ्य चौकी भवन अलपत्र रह्यो ।
यतिसम्म कि भवन निर्माणमा खटिएका स्थानीय श्रमिकलाई समेत श्रमवापतको ज्याला दिएनन् । ‘स्थानीयले लामो समय यी भवन निर्माणका लागि काम गरे तर अहिलेसम्म ज्याला पाएका छैनन्’ स्थानीय प्रविण बुढामगरले भन्नुभयो, ‘अर्कैको प्रमाणपत्र देखाएर लालबहादुर महरले भनसुनमा ठेक्का पाएको बुझिन्छ, स्थानीयको श्रम लुटियो ।’ कुरेली स्वास्थ्य चौकी भवन रेडक्रसको अगुवाइमा निर्माण गरिए पनि उपाबाङ विद्यालय भवन अलपत्र अवस्थामा छ । त्यसो त शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले निर्माण थालेका दर्जनौं योजनाहरु जिल्लाभर अलपत्र छन् ।